Meydka Saado Cali Warsame oo lagu aasay Muqdisho – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Mareeg.com: Waxaa maanta Muqdisho lagu aasay xildhibaanad Saado Cali Warsame oo shalay iyada iyo wiil gaari ku wedday koox ka tirsan Alshabaab ay ku dileen magaalada Muqdisho.
Madaxda dowladda Soomaaliya, sida madaxweyne Xasan, R/wasaare C/weli, Gudoomiyaha baarlamanka Prof. Jawaari, xildhibaano, wasiiro iyo fanaaniin ayaa meydka Saado kula dukaday salaada janaasada Masjidka Madaxtooyda.
Waxaa meydka Saado Cali Warsame lagu aasay qabuuro ku dhexyaalla Isbitaalka Madiina ee magaalada Muqdisho.
Madaxweynaha maamulka Puntland C/weli Maxamed Cali Gaas ayaa ka codsaday Ra’iisul Wasaare C/weli in meydka xildhibaanadda la geeyo qaado Puntland laguna aaso.
”Waxaan xalay la hadlay reysal wasaaraha Soomaaliya waxaana u sheegnay inaan doonayno in marxuumada lagusoo celiyo dhulkeeda oo lagu aaso Puntand maadaama ay tahay xildhibaan markii hore laga doortay halkaan…” ayuu yiri C/weli Gaas.
Madaxweyne Gaas wuxuu baaq u diray Dowladda Federaalka ah ee Soomaaliya, isagoo ka codsaday in si deg deg ah gacanta loogu soo dhigo ciddii ka dambeysey dilka Saado Cali.
”Ma dhacayso in qof halgamaa ah ama wadaniyad sida, Saado Cali Warsame oo kale ah inta la dilo lagu badbaado oo aan waxba lagasoo qaadin. Anaguna ma aqbalayno waxaana jeclaan lahayn inay xukuumaddu xil iska saarto soo qabashada dambiilayaasha lana horkeeno sharciga” madaxweynaha Puntland ayaa sidaas yiri.
Dilka shalay Muqdisho loogu geystay ayaa waxaa cambaareeyey dowladda Soomaaliya, Qaramada Midoobay iyo Midowga Afrika, mana jirto cid loo qabtay dilkaas oo Alshabaab sheegteen.
Wasiirka Amniga Qaranka oo soo saaray qorshe lagu sugayo amaanka Mudisho